Maitiro Ekuvhura Kunyoresa Lock muChiratidzo
Chiratidzo, ivo yakachengeteka mameseji kunyorera, Inosunga iyo yako nhamba yefoni. Kuti uwedzere kudzivirirwa kubva Mbavha dzinoba nhare yako, unogona kugonesa Kunyoresa Kiyi, kudzivirira chero munhu kunyoresa imwe account nenhamba yako yefoni.
Chii Chinonzi Kunyoresa Lock?
Akaundi yako yeSignal yakasungirirwa kunhamba yako yefoni, zvinoreva kuti hautombodi password kuti upinde. Akaundi yako yeSignal inogona kungobatanidzwa nenhamba imwe chete yefoni, saka unogona kungova neSignal inoshanda pane imwe iPhone kana Android smartphone pa nguva.
Kuti unyore zvakare pachigadzirwa chitsva, iwe uchada kuwana nhamba yako (kazhinji kuburikidza neSIM yako) kuti ugone kugamuchira kodhi kuratidza kuti uri ani. Asi chii chinoitika kana mumwe munhu akaba foni yako kana SIM yako, kana kuwana mukana kuGoogle Voice kana akaundi yakafanana yawanga uchinyoresa?
Kunyoresa Lock kunodzivirira account yako kubva kunyoreswazve pane chimwe chishandiso pasina PIN yawakambosaina kusaina Chiratidzo chiri kupihwa. NeKunyoresa Lock yakagoneswa, chero munhu anobata SIM yako kana account yeGoogle Voice anodawo kuziva PIN yako kuti ushandise account yako.
Signal ichavhara account yako kwevhiki kana iwe ukaisa iyo isiriyo PIN kashoma. Kana iwe ukakanganwa PIN yako, Kunyoresa Lock kuchapera mazuva manomwe mushure mekusaita (Izvi zvinogadziriswazve nguva imwe neimwe paunowana yako Signal account kubva kune chakabatana mudziyo.
Kamwe Kunyoresa Lock kwapera, iwe unozogona kunyoresa zvekare nhamba yako pasina PIN.
RELATED: Matsotsi Anogona Kubira Yako Nhamba Yenhare. Heano Maitiro Ekuvamisa
Kugonesa Kunyoresa Lock pane Chishandiso chako
Iwe unogona kugonesa Kunyoresa Lock nekutanga Signal uye nekukanda pane yako mushandisi icon mune yepamusoro-kuruboshwe kona yekona.
Mune menyu inowoneka, tinya "Zvekuvanzika" kuratidza runyorwa rwekuwedzera rwesarudzo.
Pasi peMenu Yekuvanzika, tsvaga uye gonesa "Kunyoresa Kiyi." Ingangoita hafu yepasi pasi pechinyorwa
Kana iwe uchida kuseta yako PIN, unogona kuzviita kubva pane ino menyu kuburikidza ne "Chinja Yako PIN" sarudzo. Iwe haufanire kuziva kuti chii chako PIN kuti uite izvi. Kunze kwekuti mudziyo wako wakanyoreswa, Chiratidzo chinokutendera kuti uchinje PIN yako.
Kunyange zvisingaite kuti mupambi angakwanisa kufungidzira kunyange PIN ine manhamba mana asati avharirwa muaccount yako, unogona kusarudza kugadzira PIN yakaoma yakawanda (password) nekubaya bhatani re "Gadzira Alphanumeric PIN" "Chinja YAKO PIN" menyu.
Mamwe Matipi Ekukiya Pasi Chiratidzo
Kunyangwe hazvo Chiratidzo chakanangana nekuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi, pane zvimwe zvekuchengetedza mameseji pane kungotora app. Tsvaga maitiro ekuvhara zvakanaka Signal kuchengetedza zvese zvakavanzika zveako neako.
Filed Under: famba Tagged With: Android (inoshanda sisitimu), Mobile app, smartphone, Kutumira mameseji